Azia Afovoany sy Kaokazy25 Avrily 2011
"Cyber Chaikhana" dia tetikasam-boky iray mikasika ireo mpitoraka bilaogy any Azia Afovoany sy ny fomba fahitàn'izy ireny ny any amin'ny faritra, ny kolotsaina sy ny fianana andavanandro. Natontan'i Christopher Schwartz sy navoakan'i HIVOS, ilay boky dia fantina an'ireo fitantarana nosoratan'ireo mpitoraka bilaogy ao amin'ny NewEurasia.net, ilay tambajotra fitorahana bilaogy ao...
Afrika Mainty24 Avrily 2011
Natao ny 16 Aprily 2011 teo ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao Nizeria. Goodluck Jonathan no nambara ho mpandresy. Ny mpanaramaso sasany, ka isan'ireny ny The Action Congress of Nigeria (ACN) dia nilaza fa nisy fanodinkodinana ny fifidiana mba hitongilana any amin'ny filoha teo aloha. Nitranga ny herisetra maro taorian'ny...